Fikradan xiisaha lihi waxay ina siineysaa xalka dhibaatooyinka isku-xirnaanta markaan helno wicitaan | Wararka IPhone
Xaqiiqdii in kabadan hal munaasabad, waxaad hubineysaa taleefankaaga inuu sameeyo wax muhiim ah, diris fariin, ciyaaro ama aad qabato hawl kale waxaadna heshay taleefan. Isku xirnaanta ay macruufka naga siiso wicitaannada, sida tan mugga ee horay loogu xalliyay macruufka 13, waa ugu xun ee aan ka heli karno nidaamka hawlgalka ee iPhone.
Isku xirnaanta laga heli karo Android, waxay kuxirantahay lakabka qaabeynta ee soo saare kasta, ayaa ina tusaya is dhexgalka ee daaqada sabayn si aan uga jawaabno ama u diidno wicitaan, inta aan taleefanka isticmaaleyno, xagga sare ama hoose, annaga oo aan gabi ahaanba shaashadda wada qabsanayn. Maanta waxaan ku tusineynaa xal xiiso leh oo caqli badan oo Vinoth Ragunathan na siiyo.
Vinoth Ragunathan wuxuu ina tusayaa fikrad ah Sidee Apple u hagaajin laheyd dhibaatada ka dhexeysa, dhibaato aan aragti ahaan u baahan doonin Apple inay ku shaqeyso si aad u adag. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad ku darto waxqabadka xoqitaanka interface-ka.
Sida aan ku arki karno sawirrada fikradda ah in Vinoth uu na siinayo, markaan helno wicitaan Apple ayaa noo oggolaan kara mari wicitaanka kor iyada oo aan telefoonka la dhigin, si aan u sii wadno wixii aan qabanaynay adiga oo aan wicitaanka wicin. Tani waxay sii socon doontaa in lagu muujiyo qaybta bidix ee kore ee shaashadda iyada oo qaab kiniin ah ah. Haddii aan rabno inaan ka jawaabno, waxaan ku qasbanaan doonnaa oo keliya inaan ku riixno.
Haddii aan xisaabta ku darsanno taas Apple waxay qaadatay ku dhowaad weligeedba inay wax ka beddesho interface mugga, adigoo ku dhejinaya meesha ugu sareysa kiiska ipadka ama dhanka bidix, marka laga hadlayo iPhone, waxay u badan tahay inay tahay inaan sugno dhowr sano si aan ugu raaxeysto fikraddan.
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida Apple si cad ayaa loogu waxyooday waxyaabo badan oo ka mid ah tweaks in badan oo naga mid ah ay maalin walba ku isticmaalaan taleefanka iPhone-ka. Mid ka mid ah, ayaa wax ka beddelay isku xirnaanta wicitaannada na tusinaya si la mid ah midka ay bixiso Android.
Laakiin JAILBREAK mar dambe ikhtiyaar uma ahan isticmaaleyaal badanKaliya maahan sababta oo ah Apple waxay kudareysey shaqooyinka badankood, laakiin sidoo kale sababtoo ah ma doonayaan inay soo bandhigaan macluumaadkaaga shaqsiyadeed, oo ay kujiraan xogta kaararka deynta, ee dhinacyada saddexaad ee marin uhelkayaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Fikradan xiisaha lihi waxay ina siisaa xalka dhibaatooyinka isku-xidhka marka nala soo waco